Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Enophahla - I-Airbnb
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Enophahla
Goreville, Illinois, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Kris
U-Kris uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
Ukuqashwa kwendlu eyakhiwe ngamapulangwe okunendawo yokubuka ichibi e-Lake of Egypt eningizimu ye-IL enama-loft angu-2. Kulala abantu abangu-4-6. I-canoe, i-kayak, i-paddleboat, izigxobo zokudoba namabhayisikili angu-2 asezintabeni atholakalayo ngokuqasha. Idokodo liyatholakala esikebheni sakho. Ikhishi eligcwele elinezitsha, izitsha, amabhodwe namapani kanye nokudla okumnandi okumbalwa. Wonke amashidi (amathawula, amashidi, izingubo zokulala) afakiwe. Insimbi yokosa inyama ne-firepit. Indawo yokubasa yasebusika ethokomele. Umpheme wangaphandle nokubukeka kwesibhakabhaka sasebusuku ukuze ufe ngenxa yaso.
I-loft eyodwa enombhede weNdlovukazi, i-loft eyodwa enamawele amabili nombhede wesofa phansi. Ikhishi eligcwele, igumbi lomndeni, igumbi lokudlela, indlu yokugezela enobhavu wezinyawo/ishawa, umpheme wangaphandle, ngaphesheya komgwaqo ukusuka echibini elinokufinyelela echibini, idokodo lesikebhe kanye nompheme wokubuka izinkanyezi.
Umshini wokuwasha/umshini wokomisa.
Siphinde sibe nendlu encane eyakhiwe ngamapulangwe emgwaqweni wonke uma udinga ukufaka abantu abambalwa abengeziwe futhi sinikeza isaphulelo njengesengezo ku-. Ineshawa enhle yangaphandle.
Ngaphezu kwalokho, sisanda kwakha indlu eyakhiwe esihlahleni enamakamelo okulala angu-2 uma uneqembu elikhulu!
Bheka i-Jaybird Treehouse ne-Littleoon Tiny Cabin e-Goreville IL.
4.92 · 182 okushiwo abanye
Eduze ne-Ferne Clyffee state park, i-Dolobha State Park, izindawo eziningi zewayini eziseningizimu ye-IL, namanye amachibi namapaki amaningi. Ukudoba, ukuhamba ngesikebhe, ukuhamba ngebhayisikili entabeni, ukuhamba ngezinyawo, ukuphumula!
Ungashaya ucingo noma uthumele umlayezo. 618-530-5754
Hlola ezinye izinketho ezise- Goreville namaphethelo